သန်းဝင်းလှိုင် – သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ လူထုအပေါ်ထားရှိသော သဘောထားအမှန် | MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်လိုကျွဲ - နိုင်ငံရေးသမားကိုပဲ အစိုးရက ဦးစားပေးမှာလား
င ရဲ တံ ခါး ပိ တ် ပါ စို့
သန်းဝင်းလှိုင် – သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ လူထုအပေါ်ထားရှိသော သဘောထားအမှန်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ လူထုအပေါ်ထားရှိသော သဘောထားအမှန်
ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၄
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်တာဝန်ယူခဲ့သော သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ယခုဆိုလျှင် လေးနှစ် ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ စတင်တာဝန်ယူချိန်တွင် ဟန်ပြပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အချို့ကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးနှင့် ကမ္ဘာကပါ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိနေသည် ဟု ယုံကြည် မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ယင်းယုံကြည် မျှော်လင့်ချက်တို့သည် ခဲလေသမျှ သဲရေကျ ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။
တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အချမ်းသာဆုံး၊ မြေပေါ်ရေအောက် သယံဇာတ အပေါကြွယ်ဆုံး၊ လူသားအရင်းအမြစ်အဖွံ့ဖြိုးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်အခါမှ ဆင်းရဲနိုင်မည် မဟုတ်ဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၆၂ မှ ယနေ့တိုင် စစ်အာဏာရှင် လူတစ်စု၏ မင်းမူမှုကြောင့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အမှားများ ၊ အဂတိ လိုက်စားမှုများနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပညာအရည်အချင်း ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းမှုတို့ကြောင့် သယံဇာတ ပေါကြွယ်လွန်းလှသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင် အာရှတွင် အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းသို့ပင် ရောက်ရှိသွားခဲ့ရသည်။ တစ်ချိန်က လူတစ်ဦး တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်အောက်သာ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံထက် စီးပွားရေး နိမ့်ကျခဲ့သည့် စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ယခုအခါ ကျော်တက်ဖို့ မဆိုထားဘိ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် တစ်ချိန်က ဆင်းရဲခဲ့သော နိုင်ငံများဖြစ်သည့် လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင် အဆ ၇ဝ ကျော် နိမ့်ကျသွားခဲ့ရသည်။
ဤသို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာ နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့် ပညာအရည်အချင်း နိမ့်ပါးသော စစ်ခေါင်းဆောင်များ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကျော် နိုင်ငံကို စိုးမိုးအုပ်ချုပ် ခြယ်လှယ်ခဲ့သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံ၌ စစ်တပ်က မကြာခဏ ဝင်၍ အာဏာသိမ်းတတ်သည့် အစဉ်အလာရှိသည်။ သို့သော် အာဏာကို ကြာရှည်လေးမြင့်စွာ သိမ်းယူထားလေ့ မရှိပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီသည် ၁၉၆၂ မတ်လတွင် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖြုတ်ချ၍ အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် မဆလ တစ်ပါတီအာဏာရှင် အစိုးရပုံစံဖြင့် ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလအထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ လူထုတစ်ရပ်လုံး အုံကြွပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ကမ္ဘာကျော် ၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီး ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင်( နောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) ခေါင်းဆောင်သော နဝတ စစ်အစိုးရအဖွဲ့က ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် နိုင်ငံတော် အာဏာကို မဆလ အစိုးရထံမှ တစ်ဖက်လှည့်၍ ဒုတိယအကြိမ် သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြန်သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကို တစ်ဖန်ဖြုတ်ချ၍ တက်လာသော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေသည် နဝတ၊ နအဖ စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံတော်ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြန်သည်။
သို့သော် စစ်အာဏာရှင်အနေဖြင့် ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် စစ်အာဏာရှင်များ၏ အလိုကျ၊ စိတ်တိုင်းကျ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲ၍ အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြု ပြဌာန်းကာ ပြည်သူလူထုက ၉၂ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံ အတည်ပြုခဲ့သည်ဟု မျက်နှာပြောင်တိုက် ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုအခါ အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို စစ်အာဏာရှင်တို့က အကာအကွယ်ယူ၍ နောက်တစ်လှမ်း ဆုတ်ကာ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။ အခြေအနေ မဟန်လျှင် ထပ်မံအာဏာသိမ်းရန် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို သုံးသပ်ကြည့်ပါက လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ကျော်၌ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်း ဟူ၍ ကြွေးကြော်ကာ အားလုံးပါဝင်ကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်သည် ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုများ ဖြေလျှော့ပေးခဲ့မှုကြောင့် ယခင်ကထက် ထားစရာရှိအောင် ပိုမိုကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာခဲ့သော်လည်း၊ လူထုသည် ဒုံရင်းသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်တည်ဆောက်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ တောင်းဆိုလာသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းရေးကို မလိုလား မနှစ်သက်သူများ ၊ ဒီမိုကရေစီကို ဟစ်ကြွေးနေသော်လည်း လက်တွေ့ မသွားလိုသူများသည် ခုရေတွင်းတူး၊ ခုရေကြည်သောက် ဆိုသလို မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်၊ ဒီမိုကရေစီ အလေ့အကျင့်များနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာလာခဲ့သဖြင့် အဆောတလျင် တည်ဆောက်၍ မဖြစ်နိုင် ဟု ဆင်ခြေပေးလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သမိုင်းကြောင်း ကောင်းခဲ့သူများ မဟုတ်ပေ။ အာဏာယစ်မူး၍ သူတို့ကောင်းစားရေး အတွက်သာ တဘို့ထဲရှိသော အတ္တသမားများ ဖြစ်သည်။ သူတို့က ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက် အခြေကျပြီးမှ ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မာလိမ့်မည်ဟုလည်း ဆိုကြသည်။
စစ်ကျွန်သက်ရှည်မည့် တစ်ဖက်သတ် ရေးဆွဲခဲ့သော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဖြင့် မည်သို့မျှ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစနစ် မတည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက တဖြည်းဖြည်း နားလည်သဘောပေါက်သောအခါ ဟန်ပြ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသာ အကောင်အထည် ဖော်လိုသော သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ ဇာတိရုပ်သည် ယခုအခါ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၁ ရက်တွင် ပြည်သူကို ရည်ညွှန်းသည့် သမ္မဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းကို နားထောင်ကြည့်လျှင် သိသာပေသည်။ သမ္မတ မိန့်ခွန်းထဲ၌ ပုဒ်မ ၄၃၆ အပါအ၀င် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအကြား လုံးဝ အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီး နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက် အားလုံးရရှိပြီးမှ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည် ဟု ဆိုထားသည်။
လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ လုပ်ရပ်များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက် ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်သေးပေ။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ပေမည်။ ယနေ့ ပြည်သူလူထုလိုလား တောင်းဆိုနေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဟူသည် တိုင်းပြည်၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံ တစ်ရပ်ကို ဒီမိုကရေစီ နည်းကျအောင် ပြုပြင်ပေးရန် တောင်းဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ခေါင်းဆောင်သော စစ်အစိုးရသည် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲခဲ့စဉ်ကပင် မိမိ၏ စစ်အစိုးရလက်ဝယ်ရှိသောအာဏာကို လုံးဝလွှဲပြောင်းမပေးရေး ၊ မလွှဲမရှောင်သာသည့် အခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကို လက်လွှတ်ရမည့် အခြေအနေမျိုး ကြုံတွေ့ပါက၊ မိမိတို့ လူယုံစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ အဓိကကျရာမှာ ပါဝင်သည့် ညွှန့်ပေါင်း အစိုးရမျိုး ဖြစ်ပေါ်ရေး မိမိတို့ စစ်အုပ်စုအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုံးဝလက်လွှတ်ရမည့် အခြေအနေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့လျှင် စစ်တပ်က အလျင်အမြန် အာဏာသိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိရေး၊ အကယ်၍ နိုင်ငံတော်အာဏာကို လုံးဝလက်လွှတ်ရပြီး အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရဖြစ်လာပါက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်ရေး ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် သပ်လျှိုဖြိုခွဲရေး၊ အတိတ်ကာလ တစ်လျှောက်၌ မိမိတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများအတွက် နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခြင်း မခံရေး၊ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော ဓန၊ ဥစ္စာငွေကြေးများ မိမိတို့ သား ၊ မြေး၊ မြစ်အထိ လုံခြုံစိတ်ချရရေး စသည့်အချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ ရေးဆွဲထားသည်။
ထို့ကြောင့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် စစ်ကျွန်သက် ရှည်မည့်အပြင် စစ်ခေါင်းဆောင် အသီးသီးတို့၏ ဘ၀အာမခံချက် ရရှိရေးအတွက် အကွက်စေ့စေ့ စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဖြစ်ရာ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ကြီး မတည်ဆောက်နိုင်ပေ။
ယင်းကြောင့်ပင် ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကပင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်ရန် တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူလူထုသည် ပုဒ်မ – ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပုဒ်မ-၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် လူထုအစည်းအဝေးများတွင် ပြတ်ပြတ်သားသား ဟောပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပုဒ်မ-၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် လက်မှတ်ရေးထိုးရေး စည်းရုံးလှုပ်ရှားမှုများကို နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
ယခုအခါ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုများ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြင့်လာသောအခါ မိမိတို့၏ အာဏာနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ဖက်တွယ်ထားလိုမှုများသည် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ပုဒ်မ – ၄၃၆ မပြင်ဆင်ရေးအတွက် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပုဒ်မ-၅၉ (စ) ပြင်ဆင်ရေးသည့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) အတွက် ပြင်ဆင်ရေးဟု ၀ါဒဖြန့်နေခြင်းသည် စင်စစ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး၌ ခေါင်းနှင့်ကိုယ်ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ပြောသလို ပုဒ်မ ၅၉(စ) ပြင်ဆင်ရေးသည် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို ကိုယ်စားပြုနေသော ဒီမိုကရေစီ၏ အမှတ်လက္ခဏာပင် ဖြစ်ပေသည်။
ပုဒ်မ – ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် လူထု အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက တကယ့်ကို စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အုတ်မြစ်တစ်ခု ချပေးတဲ့ ဥပဒေဖြစ်မှသာလျှင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီထူထောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မတို့ကနေ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင် ပြင်ထိုက်တဲ့ နေရာတွေကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ဒါဟာကျွန်မတို့ရဲ့ တာဝန်တစ်ခုတည်း အကျိုးကြည့်ပြီး လုပ်နေတယ်လို့ ပြောနေတာတွေကို ဂရုစိုက်ကြပါ။ အဲဒီတော့ ဒီဟာလည်း တော်တော် စဉ်းစားစရာပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပါတီတစ်ခုတည်း အကျိုးကိုကြည့်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ပါတယ်လို့ စွတ်စွဲနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်မတို့ပါတီ ၂၀၁၅ မှာ နိုင်မှာပဲလို့ တွက်နေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် ကျွန်မတို့က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းလဲလို့ရှိရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို သေချာပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒါကို နိုင်ချင်လို့ ဒါပြောင်းစေချင်တာပဲလို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ပြန်ပြီးတော့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်တယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ တွက်ရသလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ ထင်တာလဲဆိုရင် အဲဒီ အကြောင်း ပြချက်က အင်မတန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဒီဟာ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပိုပြီး ကြိုက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်အောင်လို့ ကျွန်မတို့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေချင်တာ ၊ တကယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးစေချင်လို့ ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးသွားလို့ရှိရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၁၅ မှာ နိုင်နိုင်တယ်လို့များ ဒီလိုမြင်ကြသလား။ တကယ်လို့ ဘယ်သူနိုင်နိုင်၊ အဓိက ပြည်သူလူထုရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပဲ။ ပြည်သူလူထု သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကို အဖွဲ့ချုပ်နိုင်ဖို့ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် အဖွဲ့ချုပ်ကို ဘာဖြစ်လို့ နိုင်မယ်လို့ တွက်တာလဲဆိုတာ ဒါကို ကျွန်မမေးချင်တယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ အဖွဲ့ချုပ် လက်ထဲကို ရောက်သွားမယ်ဆိုပြီး ဒီလိုမြင်တဲ့ အမြင်တွေဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သေသေချာချာ သုံးသပ်စေချင်တယ်။ ကျွန်မကတော့ အမြဲပြောပါတယ်။ ကျွန်တို့ ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လှုပ်ရှားမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်တဲ့ အခါမှာ အဓိကကျတာက ပြည်သူလူထုနဲ့ ဆက်ဆံရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုကို လှည့်ဖြားတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ဘယ်တော့မှ မရှိရဘူး။ ကျွန်မတို့ တောက်လျှောက်လည်း ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ လိပ်ပြာသန့်ပါတယ်” ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို စတင် တည်ထောင်စဉ်ကပင် ယနေ့တိုင် ပါတီ၏ တန်ဖိုးကို (၁) နိုင်ငံအပေါ် ထားရှိသည့် စေတနာ (၂) ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းစံထားများကို လေးစားလိုက်နာမှု (၃) စစ်မှန်သည့် အရည်အချင်းတို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း တန်ဖိုး ဖြတ်ထားသည်။
သို့သော် ဒီမိုကရေစီ၏ ရန်သူဖြစ်သည့် ယနေ့တိုင် သမ္မတအာဏာ ရယူထားသော ဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်လာမည်ကို စိုးရွံ့ကြောက်လန့် နေကြပေသည်။ ၎င်းတို့သည် အက်ကြောင်းထပ်အောင် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်ရေးအတွက် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဝါဒဖြန့် ဟန့်တားနှောင့်ယှက်လျက် ရှိသည်။
သာဓကအားဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပုပ်ချထားသည့် ဓာတ်ပုံအတုကို Share လုပ်ခဲ့သော ၎င်း၏ ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်ခဲ့ရမှုကို ဘီဘီစီ သတင်းဌာန၏ အင်္ဂလိပ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာ၌ ၂ဝ၁၄ ဇွန် ၉ ရက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းသည် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဥက္ကဌ ဦးဇေယျာအောင် (မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ တိုင်းမှူးဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ဇေယျာအောင်) ၏ ညီမ ဖြစ်သည်။
ဦးရဲထွဋ်က ဇနီးသည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းသည် ဇွန် ၅ ရက်တွင် အောက်တန်းကျစွာဖြင့် ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပုပ်ချထားသည့် ဓာတ်ပုံအတုတစ်ပုံကို Share ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် Facebook သုံးခဲ့သူများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန် ၆ ရက်တွင် ဦးရဲထွဋ်က ၎င်း၏ Facebook မှတစ်ဆင့် ဇနီးသည်၏ အပြုအမူအပေါ် တောင်းပန်ခဲ့သည်။ လူသိထင်ရှား ပုံနှိပ်မီဒီယာပေါ်မှ ယနေ့တိုင် မတောင်းပန်သေးပေ။
ထို့ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းကောင်း ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး ထောက်ခံသူများကိုလည်းကောင်း တောင်းပန်ကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။ ဦးရဲထွဋ်သည် မကြာသေးမီအချိန်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုမှုများကိုလည်း ကလေးဆန်သည်ဟု တရားဝင် မှတ်ချက်ပြု ပြောဆိုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ Facebook ပေါ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည့် ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သမားများသည် ဦးရဲထွဋ်က ညွှန်ကြားမှုအောက်၌ လုပ်ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသော သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။
အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ကို ပုတ်ခတ်စော်ကားသည်ဆိုသော ၂၀၁၃ နှစ်ဆန်းပိုင်းက စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ရသည့် Voice of Myanmar ဘလော့နှင့် ဘလော့ဂ်ရေးသူ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ဦးရဲထွဋ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်ရေးသားသည့် စာများအား သုံးနှစ်ကြာ ဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ၌ လွှတ်တော်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က ဦးရဲထွဋ်ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းရာ ၎င်းက ငြင်းဆိုခဲ့သော်လည်း လွှတ်တော်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သော Eleven Media Group ကမူ ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားသည် ဦးရဲထွဋ်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း တစ်ထစ်ချ ပြောကြားခဲ့သည်။ တစ်ဖန် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပိတောက်မြေရေဒီယိုတွင် သုံးနှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသော ဦးလှဆွေကလည်း Eleven Media Group ၏ ပြောကြားချက်ကို ထောက်ခံပြီး ဦးရဲထွဋ်သည် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
ဦးရဲထွဋ်သည် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်ဆန်း (ယခုအခါ သမ၀ါယမ ၀န်ကြီးဌာန အပြောင်းခံရသူ) လက်ထက်တွင် အစိုးရ၏ ဝါဒဖြန့်ချိရေးဌာနကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ကြယ်ငါးပွင့် သင်္ဘောကော်ပိုရေးရှင်း ညွှန်ချုပ် ဦးရွှေသန်း (ယခင်ရဲချုပ်ဟောင်း) ၏ သားဖြစ်သည်။ သူသည် သမိုင်းလှခဲ့သူ မဟုတ်သော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သည့်အပြင် သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တာဝန်ကိုပါ ရယူထားသည်။ တစ်ဖန် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် မရရှိစေရန် တားဆီးနေသော ပုဒ်မ၅၉(စ) ပါ ပြဌာန်းချက်များကို မပြင်ဆင်ရန် အကောင်အထည်ဖော်မှု ကော်မတီက ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဇွန် ၆ ရက်တွင် တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး ပါဝင်သော ခုနှစ်ဦးနှင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးပါဝင်သော ၁၄ ဦးက ကန့်ကွက်ခဲ့မှုကြောင့် မပြင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို သွေဖည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် သမ္မဦးသိန်းစိန်၏ ထိပ်တွင် ရှိနေရာ အရာရာတိုင်းကို သမ္မတ၏ သဘောအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်၍ မရပေ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်တိုင်ကပင် ကန့်လန့်ကာနောက်ကွယ်၌ ယနေ့လို နိုင်ငံတော် အာဏာ အ၀၀ကို ကြိုးကိုင်ထားသော အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကြိုးဆွဲရာ ကနေရသည့် ရုပ်သေးသမ္မတ ဖြစ်နေရာ မိမိပြောကြားခဲ့သည့် ကတိစကားကို အထက်အမိန့်အရ ဗလောင်းဗလဲ အမျိုးမျိုး ပြန်ပြောင်း ပြောဆိုနေသည်မို့ သူ့အတွက် ကြားက သနားနေပါတော့သည်။
မည်သို့ဆိုစေ လူထုဆန္ဒ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပေါ်လာသောအခါ လူထုဆန္ဒကို မည်သူများက အလေးထားသနည်း (ဝါ) လူထုအပေါ် ထားရှိသော ဆန္ဒ သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာရတော့မည် ဖြစ်သည်။
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လိုလားလျက်ရှိသော စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာ အကောင်းအဆိုးတို့သည် ဖန်တီးနိုင်သော စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ (ငြိမ်း)နှင့်လက်တစ်ဆုပ်စာစစ်ဗိုလ်ချုပ်လူနည်းစုတို့၏ လက်ထဲတွင်သာ ရှိနေသောကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေးသည် “ထင်သာထင် မဝင်ဘူး ကျောင်းအမရေ” ဆိုသကဲ့သို့ မရေမရာ မသေချာမှုများဖြင့် ဆက်လက် မှောင်မိုက်နေဦးမည်မှာ အသေအချာပင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
3 Responses to သန်းဝင်းလှိုင် – သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ၏ လူထုအပေါ်ထားရှိသော သဘောထားအမှန်
Hla Maung on June 23, 2014 at 10:38 am
SAYA . than win Hlaing. . thank you for your input.
It is very frustrating and upsetting for Myanmar no matter what our efforts be.
We must ‘ hit ‘ harder and harder more and more each and every day..
………………………. ………. . xxxx ……………September and November ……..I wonder something drastic !
William J. Cox on June 23, 2014 at 10:55 am
အဓိက အရေးကြီးတာကတော့ ပြည်သူ အများစုက နိုင်ငံရေး အသိပညာစိတ်ဓာတ်တွေ နိုးကြားထက်သန်လာဖို့ အထူးလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ယခုတင်ပြခဲ့သောဆောင်းပါးကို ဖတ်ရသည်မှာလည်း အလွန်ပင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမှန်တရားအချက်အလက်များကို ဖေါ်ပြပေးနိုင်သော ဆောင်းပါးကောင်းတစ်ပုဒ်လို့ နားလည်မိပါတ။် နောင်ကို လည်း ဆက်လက်တင်ပြနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
Joseph Aung on June 23, 2014 at 2:19 pm
Then, what to do .. Saya Than Win Hlaing?
Now, everybody can go to Naypyidaw and meet, give letter to ministers and president.